विज्ञान प्रविधि – Anurag Post
October 24, 2017	अनुराग पोष्ट, भिडियो, विज्ञान प्रविधि 0
इन्टरनेट भनेको के हो ? कसरी चल्छ र काहा काहा बाट जोदिएको हुन्छ अनि यसको मालिक को हो ?जान्न चाहानुहुन्छ हेर्नुहोस् यो विडियो
कता पुग्यो त्रिभुवन विमानस्थलमुनि सुरुङमार्ग बनाउने योजना ?
October 24, 2017	अनुराग पोष्ट, विज्ञान प्रविधि 0
बजेटमा उल्लेखित योजनाबारे सरोकारवाला निकाय नै बेखबर ! – चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ, ‘त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि सूर्यविनायक-कोटेश्वर सडकमा सुरुङमार्ग बनाइने छ । प्राविधिक भाषामा ‘अन्डर पास’ भनिने उक्त योजनाअनुसार काम भए विमानस्थल मुनिबाट सुरुङ मार्ग बन्नेछ । र, जुडिबुटीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडकखण्ड बन्द हुनेछ । यद्यपि, यस योजनालाई …
कपाल प्रत्यारोपण प्रति आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो यसरि रोपिने रहेछ हेर्नुहोस् विडियो
October 24, 2017	अनुराग पोष्ट, भिडियो, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य 0
आधुनिक जीवन शैली, खानपान र विभिन्न कारणले कलिलो उमेरमै कपाल गुमाउनु परेको पीडा धेरैले खेपिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि कपाल प्रत्यारोपण गर्ने प्रविधिबाट धेरैले सेवा लिरहेका छन्. । कपाल प्रत्यारोपण प्रति आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो रहेको बिशेषज्ञहरुको भनाइ छ । कपाल झरेर बजारमा बिभिन्न कपाल उमार्ने तेल खोज्दै …